Izindaba - Umbukiso waseVietnam
Ngo-Ephreli 10, inkampani yethu yaya eVietnam ukuzobamba iqhaza kulo mbukiso, yabonisa imikhiqizo ephambili yenkampani yethu: indwangu ephaketheni, Indwangu Yezokwelapha, indwangu yokugqoka, yanikeza amakhasimende ukubonisa okuningiliziwe kwemikhiqizo yenkampani namandla eNkampani.
I-Hebei Ruimian Textile Co, Ltd ibhizinisi elizimele elenziwa ngendwangu, eliyingcweti yokwakha indwangu yengubo, indwangu ye-lining nendwangu eposisha. Le nkampani iyaluka, iyafa, ingenisa futhi ihweba ngokuthengisa okuthethwe kwelinye, sinemishini yokukhiqiza yasekhaya, ethuthukile; Iningi lemikhiqizo lithunyelwa e-United States, Japan, Europe, Korea, Australia, Southeast Asia, Middle East nakwamanye amazwe nezifunda.
Inkampani yethu ihlinzeka ngazo zonke izinhlobo zezindwangu ezimpunga, indwangu ehlanganisiwe, indwangu edayiwe kanye nendwangu eprintiwe, ihlangabezana nezidingo zamakhasimende zendwangu ekhethekile yokusebenza, njenge-anti-static, ukungaholi kwamanzi, phansi-ubufakazi nokunye.
Kusukela isisekelo senkampani kusuka ngo-1995, inkampani yethu ithola ukunconywa okuphezulu okungaguquki komsebenzisi ngekhwalithi yomkhiqizo wokuqala kanye nohlelo lokuphatha okuphelele. Namuhla abasebenzi baseRuimian balandela inqubomgomo yokuthi '' ubumbano obunamandla obumangalisayo '', qhubeka nokwenza ubuciko, thatha ubuchwepheshe njengengqangi, ikhwalithi njengempilo, amakhasimende njengoNkulunkulu, futhi banikezela ukukunikeza ikhwalithi ephezulu, isici esibi no imikhiqizo ebaluleke kakhulu yePoly-Cotton.